WARARKA BARAAWEPOST arbaca 4 July 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Ciidamo Boolis ah oo tababar uga furmay dalka Turkiga iyo kuwo kale oo tababar ku soo qaatay dalka Uganda oo shalay dalka ku soo laabtay
Ciidamo boolis ah oo tababar layli sarkaalnimo ah uu muddo sannad ku dhow uga socday kulliyadda ciidanka Booliska ee dalka Uganda ayaa shalay dalka dib ugu soo laabtay.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Shariif Sheekhuna Maye oo shalay saraakiishas kula kulmay dugsiga sare ee tababarka Booliska ee Jeneral Kaahiye Police Accademy ee magaalada Muqdisho ayaa u sheegay saraakiishaas inuu aad ugu faraxsan yahay tabarkii ay soo qaateen iyo ku soo labashadooda dalka si ay u gutaan waajibaadkooda qaran.
Taliyaha ayaa sidoo kale u sheegay saraakiishaas inuu ka oggolaaday codsigoodii ahaa in la siiyo fasax dhowr maalmood ah maaddama ay muddo dheer dadlkooda iyo reerahooda ka maqnaayeen isla markaana ay u baahan yihiin waqti yar oo firaaqo ah oo ay kula kulmaan eheladooda iyo asxaabtooda.
Sidoo kale waxaa shaay uu tababar uga furmay dalka Turkiga dafcadii ugu horeysay ee ka socota ciidanka Booliska Soomaaliyeed kuwaasoo tababaro kala duwan oo dhanka xirfadda booliska ah ku qaadan doona dalkaas Turkiga kuwaasoo ay tiradoodu gaareyso ku dhowaad 8 askari oo isugu jira saraakiil iyo saraakiil xigeen kuwaasoo shan ka mid ah ay yihiin gabdho qaadanayaan uu la xiriiraa ilaalinta xarumaha Dowladda iyo dabagalka dembiyada VIP protection and criminal investigation .
Munaasabadda furitaanka tababarkan ayaa lagu qabtay xarunta tababarka booliiska dalka Turkiga maalinnimadii shalay ahayd waxaana kasoo qeybgalay saraakiisha ugu sareysa ciidammada dalka Turkiga iyo Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo xoghayaha Koowaad ee Safaaradda Mudane C/qaadir Maxamed Nuur.
Xogahayaha Koowaad ee Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in dowladda Turkigu ay ka go�antahay iney shacabka iyo dowladda Soomaaliya ka taageeraan dhinac kasta waxaana uu dhanka kale xusay in ciidammadan uu tababarku u furmay qaarkood ay yihiin saraakiil horey tababaro dalal kale ugu soo qaatay.